Kulankii 2aad ee Barlamaanka oo lagu magacaabey guddiga doorasaha lana ansixiyey – idalenews.com
Kulankii 2aad ee Barlamaanka oo lagu magacaabey guddiga doorasaha lana ansixiyey
Kulankii xunbaha cusub ee barlamaanka ee ay isugu yimaadeen maanta oo ka dhacey xarunta Gaadiidka Booliiska ee Degmada Cabdicasiis ayaa Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ku ansixiyey gudiga doorashada gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulankan ayey Xildhibaannada Baarlamaanka ku yeesheen xarunta gaadiidka Booliiska ee magaalada Muqdisho waxaana shir gudoominayey Gudoonka ay sida KMG ah xildhibaannadu shalay u doorteen General Muuse Xasan Cabdulle.
Kooramka kulankii maanta ay Xildhibaannada Baarlamaanku ku yeesheen xarunta gaadiidka Booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo xiday 184 Xildhibaan waxaana ay cod gacan tag ah ku anxiyeen gudiga doorashada gudoomiyaha Baarlamaanka iyo kuxigeennadiisa oo ah xubno ka kooban 15 Xildhibaan.
Magacyada gudiga doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka ee ay ansixiyeen Xildhibaannada Baarlamaanka ayaa kala ah:-
Caasho Xaaji Cilmi
Xasan Macalin Xuseen
Nuur Iidoow Beyle
Maxamed Maxamuud Guure
Sahro Jaamac Cali
Khadiijo Maxamed Diiriye
Caadil Sheegoow Sagaar
Fowsiyo Maxamed Sheekh
Ciise Maxamed Cali
Feysal Cumar Guuleed
Gudoonka KMGka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u go’aamiyey in 16ka bishan la qabto doorashada gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayadoo qabashada araajida musharixiinta u tartamaya xilka gudoomiyenimo ee Baarlamaanka ay ku egtahay 25bishan August.
Kulankii maanta ay Xildhibaannada Baarlamaanku ku yeesheen xarunta gaadiidka Booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa soo gebageboobay waxaana uu ahaa fadhiga Labaad eek ala fadhiga koobaad.
Siyad Macalin Axmed siyad_macalin@hotmail.com
Atto Melez Zenawi, Ra’iisul Wasaaraha Itobia oo geeriyoodey
Mahiga iyo Sharif Sheikh Axmed oo shir jaraa’id qabtey & Rajo laga muujiyey in dib loo celiyo xubnihii la diidey